Manampia Ikona Twitter amin'ny bilaoginao | Martech Zone
Manampia Ikona Twitter amin'ny bilaoginao
Saturday, May 10, 2008 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Tsy mandany fotoana betsaka araka ny itiavako azy ao amin'ny Twitter aho, saingy tena nanangana ny tenany ho fitaovana lehibe - miaraka amin'i fampiasana maro samihafa. Iray amin'ireo fampiasana ho ahy ny fampiasana azy io hanambarana ho azy ny lahatsoratro mba hahafantaran'ny mpanaraka ahy rehetra rehefa namoaka tao amin'ny bilaogiko aho. Izy io dia mandeha ho azy amin'ny fampiasana ny Plugin Updater Twitter ho an'ny WordPress.
Nanjary tena lehibe io ka nanapa-kevitra ny hanampy izany amin'ny fanangonana ahy aho Sary famantarana fahana, mailaka ary finday eo amin'ny sisin'ny sisiko. Andramo araka izay mety hahitako sary masina, na izany aza, tsy nahita na inona na inona tamin'ny Internet aho. Ka nanapa-kevitra ny hanao ny ahy aho:
Aza misalasala ampidino ireo sary masina Twitter rehetra ary na ilay rakitra Illustrator aza dia efa fanaoko nandrafitra azy ireo. Satria tsy mpanakanto sary aho dia tsy mampaninona ahy ny fomba sy ny fomba hampiasanao azy ireo na raha manatsara azy ireo ianao. Antenaina fa Twitter tsy izany koa!
Makà ny anao T-Shirt TwitterKoa!
Tags: sary famantarana twittermpanao sary twitter
Ataovy madio hatrany ny atiny! Anisan'izany ny fanehoan-kevitra
May 10, 2008 ao amin'ny 3: 29 PM
Asa tsara! Malala-tanana tokoa mizara toy izao…
May 10, 2008 ao amin'ny 6: 47 PM
Misaotra! Tsy mahafinaritra ny mitazona izany ho anao irery, Steve!
May 11, 2008 ao amin'ny 8: 11 PM
Misaotra betsaka nizara ireto sary masina ireto. Izy ireo ihany no notadiaviko mba hanovana fanovana avy amin'ny 'Twitter Boxes' izay nampiasako hatrizay.
Efa nasiako sary famantarana eo amin'ny sisin'ny sisin'ny bilaogiko ary tsara izany.
May 12, 2008 amin'ny 2: 23 AM
Vao nampiditra an'ity plugin ity aho ary ankoatry ny tsy fahatsiarovako ny adiresy mailaka nanoratako ny kaontiko twitter (doh!) Dia niasa toy ny fitsaboana ahy io raha vao napetrakao ilay mety. Misaotra.
May 12, 2008 amin'ny 8: 03 AM
Tiavo ny sary masina! Iza no mahalala, angamba ianao no namorona ilay sary masina Twitter vaovao. Tsy maintsy jereko raha afaka mamoaka an'io amin'ny tranokala vaovao aho alohan'ny hanombohany amin'ity herinandro ity.
May 13, 2008 amin'ny 5: 37 AM
Tiavo ireo sary masina, misaotra nizara azy ireo.
14 Aogositra 2008 amin'ny 10:27 PM
Misaotra ny kisary. Ampiasaiko eo amin'ny tranokalako izany!
Sep 1, 2008 ao amin'ny 1: PM PM
Doug, naka pilina tonga lafatra ve ianao sa zavatra hafa? Cuz ity dia PERFECT fotsiny. Nieritreritra ny hanampy Twitter amin'ny bilaogiko manokana sy ny bilaogiko momba ny famolavolana tranonkala fotsiny aho. Ary BAM, eto izy ireo!
Indray mandeha indray, toy ny plugin Contact Form anao, fitaovana miavaka sy tena ilaina.
Misaotra Joni! Tsara fanahy loatra ianao.
Sep 29, 2008 ao amin'ny 8: PM PM
Wow, tonga lafatra! Googled fotsiny aho mba hahita sary twitter mahafinaritra taorian'ny nilavoasako nitady zavatra tao amin'ny twitter. Asa tsara, ary hampiasa izany amin'ny toerana maro aho satria manana tranonkala maromaro.
Dec 21, 2008 amin'ny 12: 18 AM
Misaotra anao tamin'ity tolotra malala-tanana ity. Nampihariko tao amin'ny bilaogiko ny sarin-tsary ary miasa toy ny ody fiaro.
28 Mey 2009 tamin'ny 6:49 hariva
Misaotra ny fizarana. Nampiasa sary masina twitter tao amin'ny piraofilin'ny LiveJournal.
Mar 7, 2009 amin'ny 12: 20 AM
Misaotra, Doug. Manomboka tranokala ao amin'ny Blogger aho izao ary mitady sary famantarana Twitter mahafinaritra aho, ity pejy ity dia tampoka amin'ny valiny. Misaotra, indray ary azonao antoka fa ho mahazatra eto aho, ity tranonkala ity dia loharanom-pahalalana sy loharanom-pahalalana.
Mar 8, 2009 amin'ny 12: 47 AM
Misaotra ny sary twitter - ny 50 x 50 dia aseho am-pireharehana ankehitriny.
Mar 18, 2009 ao amin'ny 5: PM PM
misaotra tamin'ny fampiasanao ireo sary masina.
Izaho dia eo amin'ny twiter aswell.
mianatra manomboka ny bilaogiko manokana.
mifandraisa hatrany raha mila fanavaozana ny toerana hisehoan'ny kisaryo.
mamerina ny fisaorana anao.
Mar 20, 2009 amin'ny 1: 15 AM
Misaotra anao nanolotra ireto sary masina Twitter ireto. Vao namoaka iray tao amin'ny bilaogiko aho.